Wasiirka difaaca Soomaaliya oo kormeeray ciidamo tababar uu kaga socdo Caabudwaaq – STAR FM SOMALIA
Wasiirka difaaca Soomaaliya oo kormeeray ciidamo tababar uu kaga socdo Caabudwaaq
Wasiirka wasaarada Difaaca Soomaaliya mudane C/qaadir Sheakh Cali Diini oo maalmahanba ku sugnaa degmada Caabudwaaq ee gobolka Galgaduud ayaa kormeeray ciidamo katirsan kuwa xooga dalka, oo uu tababar uga socdo xeryo ciidan oo ku yaala degmadaasi.
Wasiirka ayaa halkaasi kula hadlay ciidamadaasi kamidka ah xooga dalka, ee uu u soconayo tababarka, isagoo u jeediyey hadal u badnaa dardaaran.
Mudane C/qaadir Sheakh Cali Diini wasiirka wasaarada difaaca Soomaaliya waxa uu ku bogaadiyey ciidankaasi in ay yihiin kuwa u taagan difaaca iyo ilaalinta dadka iyo dalka, islamarkaana looga baahan yahay in ay si wanaagsan u gutaan waajibkooda.
Wasiirka ayaa degmada Caabudwaaq u gaaray xalinta dagaal beeleedyo kajira deegaano katirsan gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya.
Maxkamada Ciidamada Somaliland oo 8 ruux ku xukuntay dil toogasho
Guddoomiye ku xigeenka labaad ee Baarlamaanka iyo Wasiirka Amniga oo gaaray Baledweyne